दुर्इ तला अण्डरग्राउण्ड सहित बन्दैछ लिफ्ट सहितको २२ तले धरहरा, यस्तो छ आधुनिक धरहरा! – www.agnijwala.com
दुर्इ तला अण्डरग्राउण्ड सहित बन्दैछ लिफ्ट सहितको २२ तले धरहरा, यस्तो छ आधुनिक धरहरा!
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण सम्पदा महाशाखा प्रमुख राजुमान मानन्धरका अनुसार अहिले धरहराको डिजाइन तयार भैसकेर डिजाइनमाथि विज्ञहरुसंग छलफल भैरहेको छ।
उनले धरहराको डिजाइन तयार भएर विज्ञहरुसंग थप छलफल गरिरहेको बताए। ‘अबको एक महिनामा ग्लोवल टेण्डर आव्हान गर्छौ’- उनले भने। त्यहाँ निर्माणका क्रममा आउन सक्ने समस्या, विज्ञहरुको राय लिएर टेण्डर खोलिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अब दुर्इ बर्षमा तयार गर्ने कार्यतालिका सहित धरहरा पुनर्निर्माण थालिने छ। गत मंसिर १ गते बसेको मन्त्री परिषदको वैठकले धरहरा पुनर्निर्माण जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलार्इ दिएको थियो ।
सुरुमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेर नेपाल टेलिकमलार्इ धरहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल टेलिकमले नयाँ व्यापारिक कम्प्लेक्स सहित धरहरा बनाउन प्रस्ताव गर्यो । धरहरा मात्र निर्माण गर्दा लगानी समेत नउठ्ने भन्दै व्यापारिक कम्प्लेक्स समेत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव टेलिकमको थियो।
नेपाल टेलिकमले हात झिकेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नै नेतृत्वमा धरहरा पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो। त्यस्तै मन्त्रीपरिषदको निर्णयले धरहरा पुनर्निर्माणमा अन्योलता देखिएको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्वमा बनाउन निर्देशन दिएको हो।
आधुनिक धरहराको स्केच
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अब बन्ने धरहरा २२ तलाको हुने छ । तर बाहिरबाट देख्दा भने ९ तलाकै पुरानै जस्तो देखिने छ। अण्डर ग्राउण्ड दुर्इ तलासहित धरहरा ६९.२ मिटर लम्वार्इको हुनेछ। त्यसमाथि करिव ३६ फिटको गुम्वज रहने छ। त्यसमाथि गजुर रहने छ।
पुरानै धरहराको गजुर पुरातत्वले सुरक्षित राखेकाले त्यसलार्इ नयाँ धरहरामा राखिने छ। धरहराको बीच भागमा दुर्इ वटा लिफ्ट हुनेछन्। त्यस्तै विकल्पका रुपमा धरहरा चढ्नका लागि भित्रैबाट भर्याङ समेत निर्माण हुने छ।
अण्डरग्राउण्डको पहिलो तलामा कार पार्किङ निर्माण हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो तलामा कफी शप तथा गिफ्ट शपहरु निर्माण हुनेछन्। धरहरा चढ्नका लागि अण्डरग्राउण्डमा गएर लिफ्ट चढ्नुपर्छ।
धरहराको वरिपरि कुनै व्यावसायिक कम्प्लेक्स रहने छैनन्। तर वरिपरि हरियो दुवो तथा फुलहरु रोपेर मनमोहक गार्डेन बनाइने महाशाखा प्रमुख मानन्धरले जानकारी दिए। धरहरा परिसरमा म्युजिकल फाउण्टेन समेत निर्माण हुनेछ जहाँ राती सौर्यबत्तीको व्यवस्था गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
काठमाडौंका घुम्नै पर्ने ठाउँमध्ये धरहरालार्इ प्रमुख स्थानका रुपमा विकास गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पुरानो धरहराको ६ रोपनी,सुन्धाराको १० रोपनी,१२ रोपनी गरि २८ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा निर्माण हुने छ।
टक्सार विभागको १२ रोपनी भने धरहरा नसमेटिने प्राधिकरणले जनाएको छ। हुलाकका लागि चार खालमा करिव १५ रोपनी जग्गा को व्यवस्था भैसकेको छ। तर टक्सारका लागि जग्गा अर्को ठाउँमा खोज्दा ढिलार्इ र समस्या आउन सक्ने भएकाले यसलार्इ नसमेटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पुरानो धरहरालार्इ सुरक्षित राखिने
हाल भत्किएर बाँकी रहेको धरहराको अवशेषलार्इ समेत सुरक्षित राखिने भएको छ। भत्केको धरहराको ठुटोलार्इ काँचले छोपेर सुरक्षित राखिने छ जुन इतिहासका रुपमा अवलोकन गर्न मिल्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भत्किएको धरहरासंगै अर्को अत्याधुनिक धरहरा निर्माण गर्न लागिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार पुरातत्व विभागसंग मिलेर ६८ लाख रुपैयाँ लागतमा नयाँ धरहराको डिजाइन तयार पारिएको हो।
आधुनिक धरहराका लागि ३ अर्ब खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियान अन्तर्गत ९ करोड रुपैयाँ संकलन भैसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
rabota.reviewsстеп платформа интернет магазинрегистрациядоски паркетнойкатушка для спінінгаseo продвижение yandex